Xayiraadda Trump: Xaakim ballaariyay sharaxaadda qaraabo dhaw | Baydhabo Online
Waaliddiinta sida awawga, ayayda iyo qaraabada kale ee ay leeyihiin dadka ku nool dalka Maraykanka ayaan laga hor istaagi karin socdaalka iyaga oo loo cuskanayo amarkii madaxweyne Trump, sida uu go’aamiyay xaakim Maraykan ah.
Xaakimkan ayaa sheegay in mamnuucitaanku uu si yar fasiraad uga bixiyay go’aankii maxkamadda.
Go’aan ay maxkamad gaartay bishii hore ayaa qayb ahaan soo celiyay xayiraaddii uu Trump saaray dadka ka soo safraya lix dal oo ay muslimiintu u badan yihiin.
Maxkamadda ayaa sheegtay in safarka loo ogolaado in ay Maraykanka soo galaan dadka “qaraaabada dhaw” ku leh.
Laakiin maamulka Trump ayaa go’aamiyay in aan qaraabada dhaw lagu darin awoowga, ayeeyda, dumaashiga, dumaashida, adeerka, abtiga, habaryarta, caruurta ay walaaladaa dhaleen iyo ilmo adeerrada.